Soo dejisan Stamina 2.5 – Vessoft
Madaale – software ah si ay u tababaraan makiinada soonka on keyboard ah. Software waxa ku jira hababka kala duwan oo loo qaybiyey casharada in la xasuusto khariidad muhiimka ah. Madaale bandhigayaa garaaf ee xawaaraha makiinada oo awood u aragto tirakoobka ee horumarka by maalmood iyo casharada. Software ka kooban editor waano ah oo aad ka bedelan karto si erayada ama lambarada iyo abuuro casharo cusub oo la characters lagama maarmaan u dhigay. Madaale sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad la qabsato midabka ama font qoraalka, dhigay music asalka iyo Customize muuqaal u eg ka software ah.
Hababka kala duwan ee tababarka
Backlight meesha hada ah xarfaha
Muujiya meelaha farta kasta ku keyboard ah
Garaafyada ee horumarka
Editor of casharada
Soo dejisan Stamina
Faallo ku saabsan Stamina
Stamina Xirfadaha la xiriira
Baabuloon – qaamuus qaamuus elektiroonig ah oo lagu taageerayo luqado badan oo kala duwan. Softiweerku wuxuu tarjumaa kelmadaha ama jumladaha kaladuwan wuxuuna ka koobanyahay keyd badan oo ereyo ah qaamuusyo kala duwan.
Google Earth – softiweer si loo eego dusha sare ee dhulka si faahfaahsan iyadoo la kaashanayo sawirada dayax gacmeedka oo lagu muujiyo walxaha sawiradda 3D.
Anki – waa hab ku habboon oo lagu horumariyo xusuusta laguna barto luqadaha qalaad. Software-ka ayaa falanqeynaya maareynta macluumaadka ee isticmaaleha isla markaana wuxuu go aansadaa habka ugu wanaagsan ee barashada algorithm.
Hetman Partition Recovery – waa hab ku habboon oo lagu soo celiyo faylasha si shil ah loo tirtiray ama lumay. Software-ka wuxuu taageeraa noocyo farabadan oo ka kooban qeybaha kaladuwan ee soo kabashada xogta.
Tani waa uninstaller ah ee antiviruses Panda iyo alaabta ammaanka. Adeegga wuxuu si buuxda uga saarayaa antivirus nidaamka, xitaa haddii aysan ku jirin liiska barnaamijyada la rakibay.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu abuuro jadwalka sawirada noocyada kala duwan, kaas oo taageera fursado badan oo naqshadeysan iyo daabacan tayo sare leh.